Daawo:- Puntland oo kahadashay shan Alshabaab ah oo kayimid Somaliland oo lagu qabtay Sanaag. | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Taliyaha Qaybta Booliska Gobolka Sanaag ee dowladda Puntland Gaashanle Sare Cabdirisaaq Faarax Warsame ayaa Ka hadlay Rag Alshabaab Ka Tirsanaa Oo duleedka magalada Badhan dhawaan Lagu qabtay.
Taliyaja ayaa sheegay Inay Burco ka Yimaadeen soona mareen deegaano badan oo katirsan gobollada Somaliland.
Dhinaca kale waxa uu kahadlay taliye candirisaaq in Alshabaabka ay isku dayeen inay baxsadaan kadibna ciidanka ay rasaas hubiyeen taas oo dhalisay khasaare.
Previous articleDegdeg:- Musharixiinta mucaaradka ee Jubbaland oo qaadacay liiska xildhibaanada cusub.
Next articleDaawo:- Cirro oo si adag uga hadlay sawirkii ay wada galeen Biixi iyo Wasiirada katirsan DF Somalia.
axmed August 13, 2019 At 7:41 pm
in la wada laayey aheyd si aysan mar dambe u dhicin qaar kaloo isku daya sidaas, waxaan isaaq baa soo daabulaya, hadabkii la qabto hala waso.
Nuur August 13, 2019 At 7:54 pm
Maydkooda ayda haloo daadsho, ama iyagoo nool waraabeyaal haloo xiro si looga jaaseeyo ciqaabta ay dadka horey u ciqaabeen
Fanax August 13, 2019 At 10:00 pm
axmed & Nuur niman yahow soomaali waa layski diray qaar badanna waa masaakiin qoysaskooda ku korsada kistaas yaree qoryaha loogu raray. Waa aabeyaal wax korinaya oo lahayn meelay quutul yoon kale ka raadsadaan. Waa lagu shaqeysanayaa oo mana laha si ay ku diidi karaan labada boqol oo doolar oo loogu kireysto ayagooy gurboodku ku hor gaajooneyso. Saa moodeen maahan sxbyaal.
Ninka habroyinka waqooyi biiqa August 13, 2019 At 11:13 pm
Marka waxad leedahay iska daaya ha laayan umaad kale oo musliin ah sii ay uheelan $200 oo ay ku korsanayan ciiyaalkoda? Marka hore lacaq xaaran waaye marka xiigta cid ka yeelayso cadowgoda inu laayo adunka majirto marka akliigada ka shaaqaysii ee sida xoolaha ha ufiikiriin.
Nuur August 13, 2019 At 10:22 pm
Shaydaan intaanu ku dilin sow inaad isdhaafisid ma aha, kana adkeysatid difaaca oo uu naxdin iyo baqo meel walba la joogo, hadii kale aduu intaa kugu rarayaa.
hadii maanta ilmo yar middi laguugu dhiibo oo aad ogtahay mar aadan iska jirin inuu kula helayo, ma hurayso inaad laad darbo xoogan ah ku garaacdo marka uu kuhorjoogo, si aad uga tuurto balaayada. Tan kale balo koriye sow beri soo saari mayo kuwo kasii daran, marka intaanu isagu mas nagu korin aan anagu dadkayaga korsano. Hadad ogaan lahayd waa dhoweyd puntiland waa loosoo shaqo atagay oo meelwalba ayaa kilaab la isga keenay, waxa keliya oon maanta ku guulaysanay waa jixinjix la’aanta aan karbaashaka saarnay xataa kii nala dhashay oo iayaga raacay, dadkuna hadaanu kala miirmin waligeed waa lais daba joogayaa.
xamar ninkii naxariista u sameeyay sow ma’aydilin, yay naxariis u falayaan.